Iza no ho any An-danitra? Ny Tsara Fanahy Rehetra Ve? | Fanontaniana
HAMAKY AMIN'NY TENY Afrikaans Albaney Alemà Amharique Anglisy Arabo Armenianina Armenianina (Andrefana) Aymara Boligara Catalan Cebuano Chichewa Chitonga Cinghalais Dangme Danoà Efik Espaniola Estonianina Failandey Fidjianina Frantsay Ga Grika Groenlandey Guarani Géorgien Hebreo Hiligaynon Holandey Hongroà Ibo Iloko Indonezianina Iokrenianina Islandey Italianina Japoney Kantôney Nentim-paharazana Kazakh Kikongo Kikuyu Kiluba Kinyarwanda Kirghiz Kirundi Kisonge Kongo Koreanina Kreôla any Haïti Kreôla any Seychelles Kroaty Lingala Litoanianina Luo Malagasy Maltais Mandarin Nentim-paharazana Mandarin Notsorina Maya Mazateky (Huautla) Mixe (Afovoany) Mizo Mooré Myama Nahuatl (Puebla Avaratra) Ngabere Niue Norvezianina Nzema Ossète Ouzbek Papiamento (Aruba) Papiamento (Curaçao) Pendjabi Poloney Portogey (Brezila) Quechua (Ayacucho) Quechua (Bolivia) Quichua (Imbabura) Rarotonga Romanianina Rosianina Samoanina Sango Sepedi Serba (Sirilika) Serba (Soratra Romanina) Sesotho (Lesotho) Setswana Shona Silozi Sinoa Kantôney Notsorina Slovaky Slovenianina Soedoà Sranan Tongo Swahili Tagalog Tahisianina Tailandey Tatar Tigrigna Tiorka Tseky Tsonga Twi Uruund Venda Vietnamianina Wayuunaiki Xhosa Yorobà Zoloa Éwé
Olona an-tapitrisany no te ho any an-danitra. Nilaza i Jesosy fa ho any ny apostoliny tsy mivadika. Nampanantena izy, talohan’ny nahafatesany, fa hanomana toerana ho azy ireo any amin’ilay Rainy any an-danitra.—Vakio ny Jaona 14:2.
Nahoana no hisy olona hatsangana amin’ny maty mba ho any an-danitra? Hanao inona any izy ireo? Nilaza tamin’ny apostoliny i Jesosy fa ho mpanjaka hitondra ny tany izy ireo.—Vakio ny Lioka 22:28-30; Apokalypsy 5:10.
Ho any an-danitra ve ny tsara fanahy rehetra?
Olona vitsivitsy ihany no mpitondra, any amin’ny tany maro. Nilaza i Jesosy fa hitondra ny tany ireo hatsangana ho any an-danitra. Midika izany fa ho vitsivitsy koa izy ireo. (Lioka 12:32) Lazain’ny Baiboly mazava tsara ny isan’ireo hiara-manjaka amin’i Jesosy.—Vakio ny Apokalypsy 14:1.
Nanomana toerana any an-danitra ho an’ny mpanara-dia azy vitsivitsy i Jesosy. Fantatrao ve izay hataon’izy ireo any?
Tsy hoe izay ho any an-danitra ihany akory no hahazo valisoa. Hiaina mandrakizay ao amin’ny paradisa eto an-tany ireo olom-pehezin’ny Fanjakan’i Jesosy. (Jaona 3:16) Ahoana no hahatongavan’izy ireo ao? Ho tafavoaka velona amin’ny fandringanana an’ity tontolo ratsy ity ny sasany. Ny hafa kosa hatsangana amin’ny maty.—Vakio ny Salamo 37:29; Jaona 5:28, 29.
Lanitra Fiainana & Fahafatesana